ग्रह शनि: तपाईलाई थाहा पाउनु पर्ने सबै | नेटवर्क मौसम विज्ञान
आज हामी खगोल विज्ञानमा फर्क्यौं। हाम्रो विशेषताहरु विश्लेषण पछि सौर्य प्रणालीहामीले सबै ग्रहहरू एक एक गरी वर्णन गरेर शुरू गरेका छौं। हामीले त्यो देख्यौं बुध यो सूर्यको सब भन्दा नजिकको ग्रह थियो, बृहस्पति सौर्यमण्डलमा सबैभन्दा ठूलो र मार्टे यसले जीवनलाई बन्दरगाह गर्न सक्छ। आज हामी ध्यान केन्द्रित गर्नेछौं ग्रह शनि। दुई ठूला ग्रहहरू मध्ये एक र क्षुद्रग्रह रिंगको लागि प्रख्यात। यो एक ग्रह हो जुन सजिलै पृथ्वीबाट देख्न सकिन्छ।
के तपाई शनि ग्रहका सबै रहस्य जान्न चाहनुहुन्छ? पढ्नुहोस् र पत्ता लगाउनुहोस्।
2 शनि ग्रहको भित्री भाग र वातावरण कस्तो छ?
3 चन्द्रमाहरू र उपग्रहहरू
4 पृथ्वीबाट अवलोकन
शनि ग्रह एक विशेष ग्रह हो। वैज्ञानिकहरूको लागि यो सम्पूर्ण सौर्यमण्डलको बारेमा जान्न सबैभन्दा रोचक ग्रह मानिन्छ। यसले हाइलाइट गर्दछ कि यो छ पानीको भन्दा घनत्व धेरै कम र यो पूर्णतया हाइड्रोजनले बनेको छ, केही हिलियम र मिथेनको साथ।
यो ग्यास दिग्गजहरूको कोटीसँग सम्बन्धित छ र यसको सट्टामा विचित्र रंग छ जसले यसलाई बाँकीबाट अलग बनाउँदछ। यो केही पहेँलो छ र यस भित्र अन्य र colors्गका साना ब्यान्डहरू जोडिएका छन्। धेरैले यसलाई बृहस्पतिसँग भ्रमित गर्दछन् तर तिनीहरू सबै एक अर्कासँग सम्बन्धित छैनन्। तिनीहरू स्पष्ट रूपमा औंठीद्वारा भिन्न छन्। वैज्ञानिकहरूले अनुमान लगाए कि यसको घण्टीहरू पानीले बनेका छन् तर हिमशिलाहरू, हिउँ पर्वतहरू वा केही स्नोबलहरू जस्ता ठोस किसिमले विशेष गरी रासायनिक धूलोको साथ।
पहिले नै १1610१० मा ग्रह शनिबार वरपरको हावा पत्ता लगाइएको थियो ग्यालिलियो र टेलिस्कोप को लागी धन्यवाद। त्यो आविष्कारमा यो पत्ता लागेको थियो कि यताउता हुरी चल्ने बतासहरूले कति छिटो छिटो छिटो बेग्लाबेग्लै वेगमा गर्छ। यो सबै को सब भन्दा महत्वपूर्ण र यो जान्नेहरु को लागी स्तब्ध पार्ने, कि यो मात्र ग्रह भूमध्यरेखा मा स्थान लिन्छ।
शनि ग्रहको भित्री भाग र वातावरण कस्तो छ?
सौर्यमण्डलका अन्य ग्रहहरू जस्तो नभई, शनि ग्रहको घनत्व हाम्रो ग्रहको पानी भन्दा कम छ। संरचना पूर्ण रूपमा हाइड्रोजनले बनेको हुन्छ। ग्रहको केन्द्रमा यसको धेरै मूल तत्वहरूको अस्तित्व रुजू गर्न सकिन्छ। यी भारी तत्वहरू हुन् जसले यस ग्रहले ठोस संरचनाहरू बनाउँदछन्, किनकि यसले चट्टानहरूको सानो समूह बनाएको छ वा त्यसमा चट्टानहरू गठन भएको छ। यी चट्टानहरु तिनीहरू लगभग १,15.000,००० डिग्री तापमानको पुग्न सक्दछन्।
जुपिटरसँगै यो सौर्यमण्डलको दुई ठूला ग्रहहरू मात्र होईन, तर सबैभन्दा तल्लो पनि मानिन्छ।
यसको वातावरणको लागि, यो हाइड्रोजनबाट बनेको छ। त्यहाँ अन्य तत्वहरू छन् जुन यो बनेको छ र यो सम्भव भएसम्म सबै सम्भावित तत्त्वहरू जान्नु आवश्यक छ जुन ग्रह समग्रमा हुन सक्ने विशेषताहरू जान्न आवश्यक छ।
बाँकी तत्त्वहरूका साना खुराकहरू छन्। यो मिथेन र अमोनियाको बारेमा हो। त्यहाँ अन्य बिभिन्न मात्रामा ग्यासहरू पनि हुन्छन् जुन ईथेनोल, एसिटिलीन र फास्फिन जस्ता मुख्य तत्वहरूसँग मिलेर हस्तक्षेप गर्दछन्। यी एकमात्र ग्यासहरू हुन् जुन भौतिक विज्ञहरूले अध्ययन गर्न सकेका छन्, यद्यपि यो ज्ञात छ कि यो एकमात्र संरचना होईन।
शनिको घण्टी ग्रहको भूमध्यरेखामा विस्तार हुन्छ 6630 120० किलोमिटरबाट १२०, km०० किमी सम्म शनिको भूमध्यरेखामा र तिनीहरू प्रशस्त बरफको पानीले कणहरू मिलेर बनेको छ। प्रत्येक कणको आकार माइक्रोस्कोपिक धुलो कण देखि चट्टानहरू को लागी केहि मिटर को आकार मा। रिingsहरूको उच्च अल्बेडोले देखाउँदछ कि ती सौर्य प्रणालीको इतिहासमा तुलनात्मक रूपमा आधुनिक छन्।
चन्द्रमाहरू र उपग्रहहरू
यी सबै मनमोहक सुविधाहरूमध्ये शनिले यस रोचक ग्रहलाई जान्नको लागि बनाउँछ, हामीले उपग्रहहरू पनि हाइलाइट गर्नुपर्दछ जुन यो रचना गरिएको हो। हालसम्म १ s उपग्रहहरू क्षेत्रका विज्ञ फिजिक्सलिष्टहरूले मान्यता दिएका र नामकरण गरिएको छ। यसले ग्रहलाई अधिक सान्दर्भिकता र यसलाई बहुमुखी प्रतिभा दिन्छ। तिनीहरूलाई अझ राम्ररी चिन्न, हामी तिनीहरू मध्ये केही नाम लिन जाँदैछौं।
सबै भन्दा राम्रो ज्ञात हो तथाकथित Hyperion र Iapetus, जुन पूर्ण रूपमा तिनीहरूभित्र पानीले बनेको हुन्छ तर यति ठोस छ कि उनीहरू मौलिक रूपमा स्थिर र हिउँको रूपमा क्रमशः मानिन्छ।
शनिको भित्री र बाहिरी दुबै उपग्रहहरू छन्। इंटर्नलहरूमा सबैभन्दा महत्वपूर्ण व्यक्तिहरू हुन् जसमा कक्षा टाइटान भनिन्छ। यो शनिको सब भन्दा ठूलो चन्द्रमा हो, यद्यपि यसलाई सजिलैसँग देख्न सकिदैन किनकि यसलाई बाक्लो सुन्तला कुहिरले घेरेको छ। टायटन एउटा चन्द्रमा हो जुन प्रायः पूर्णतया नाइट्रोजनबाट बनेको हुन्छ।
यस चन्द्रको भित्री भागले बनेको छ कार्बन हाइड्रोक्साइड चट्टान, मिथेन अन्य रासायनिक तत्त्वहरू बीच यो सामान्य ग्रह जस्तै समान छ। मात्रा सामान्यतया उही हुन् र अधिकमा तिनीहरू भन्दछन्, समान साइजमा पनि।
हामीले अघि नै भनें कि यो एक ग्रह हो जुन सजिलै हाम्रो ग्रहबाट अवलोकन गर्न सकिन्छ। यो आकाशमा प्रायः कुनै पनि प्रकारको होबिस्ट टेलिस्कोपसँग देख्न सकिन्छ। यसको अवलोकन उत्तम हुन्छ जब ग्रह नजिक वा विपक्षमा हुन्छ, अर्थात यो ग्रहको स्थान जब यो १ 180० डिग्रीको विस्तारमा हुन्छ, त्यसैले यो आकाशको सूर्यको बिरूद्ध देखा पर्दछ।
यो रातको आकाशमा प्रकाशको बिन्दुको रूपमा देख्न सकिन्छ जुन फ्लिक हुँदैन। यो उज्यालो र पहेंलो छ र यसको कक्षामा एक पूर्ण अनुवाद क्रान्ति पूरा गर्न करीव साढे २। वर्ष लाग्छ राशिचक्र सम्बन्धित पृष्ठभूमि सिताराको सम्मानका साथ। जो व्यक्ति शनिको घण्टी छुट्याउन चाहान्छन्, उनीहरूलाई कम्तिमा २०x को टेलिस्कोप चाहिन्छ ताकि यो स्पष्ट देखिन सकियोस्।
अन्तरिक्ष देखि आफ्नो दृश्य को रूप मा, तीन अमेरिकी अन्तरिक्ष यान शनि को बाह्य र वातावरण हेर्न यात्रा गरेका छन्। जहाजहरू बोलाइयो अग्रगामी ११ प्रोब र भ्याएजर १ र २। यी अन्तरिक्ष यानले क्रमशः १ 1979 1980,, १ 1981 .० र १ XNUMX XNUMX१ मा ग्रह माथि उडान गर्यो। सही र गुणस्तर जानकारी प्राप्त गर्न, तिनीहरूले दृश्य, अल्ट्राभायोलेट, इन्फ्रारेड र रेडियो वेभ स्पेक्ट्रममा विकिरणको तीव्रता र ध्रुवीकरण विश्लेषण गर्न उपकरणहरू बोकेका थिए।
तिनीहरू चुम्बकीय क्षेत्रहरु को अध्ययन को लागी र चार्ज कणहरु र धूलो अनाज पत्ता लगाउन को लागी उपकरणहरु संग पनि सुसज्जित छन्।
मलाई आशा छ कि यस जानकारीको साथ तपाईले शनि ग्रहलाई अझ राम्ररी चिन्नुहुनेछ।
लेखको पूर्ण मार्ग: नेटवर्क मौसम विज्ञान » खगोल विज्ञान » ग्रह शनि
मेसोजोइक युग: सबै कुरा तपाईंले जान्नु आवश्यक छ
सबै भन्दा राम्रो छूट संग हाम्रो चयन हेर्नुहोस्